Atoyerɛnkyɛm Bere Mu Mmoa: Atoyerɛnkyɛm Si a, Ɔdɔ Ka Yɛn ma Yɛyɛ Ho Biribi
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitumbuka Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Fante Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Kirundi Korean Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Marathi Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Punjabi Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Tigrinya Totonac Tsonga Tswana Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Valencian Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Sɛ atoyerɛnkyɛm si a, Yehowa Adansefo boa wɔn mfɛfo agyidifo ne afoforo nso. Ɔdɔ na ɛka wɔn ma wɔyɛ saa, na ɛyɛ ade baako a ɛkyerɛ sɛ wɔyɛ nokware Kristofo.​—Yohane 13:35.
Efi afe 2011 kosi afe 2012 mfinimfini hɔ baabi no, Yehowa Adansefo de mmoa maa afoforo, na kakraa bi pɛ na yɛaka wɔ ase ha. Sɛ yɛreboa afoforo a, bere nyinaa yɛde Bible mu asɛm hyɛ wɔn nkuran kyekye wɔn werɛ, nanso ɛno de, yɛanka ho asɛm. Yɛn adwumayɛbea ahorow no hyehyɛ Atoyerɛnkyɛm Bere Mu Aboafo Kuw ma wɔhwɛ adwuma ne fã kɛse no ara so. Afei, ɛyɛ a asafo ahorow a ɛwɔ ɔman no mu nso boa adwuma no.
Japan: March 11, 2011 no, asasewosow sii ma ɛpo twiw faa asase so wɔ Japan atifi fam. Atoyerɛnkyɛm no kaa nnipa mpempem pii. Yehowa Adansefo a wɔwɔ wiase nyinaa fii wɔn pɛ de wɔn sika, wɔn ahoɔden, ne nneɛma foforo kɔboae. Bere a asasewosow sii wɔ Japan no, nea yɛyɛ de boae no, hwɛ ɛho video.
Brazil: Nsuyiri, mmepɔw a edwiriw gu, ne atɛkyɛ a etwiw fa asase so kunkum nnipa ɔhaha pii. Nneɛma a Yehowa Adansefo de kɔboae no, ebi ne nnuan a ɛnsɛe ntɛm bɛyɛ kilogram 38,000, nsu ntoa 20,000, ntade bɛyɛ kilogram 9,000, samina ne nea ɛkeka ho bɛyɛ kilogram 4,500, ne nnuru.
Congo (Brazzaville): Bere a topae bi towee no, Yehowa Adansefo 4 afie sɛee, na Adansefo 28 nso afie ho bubui. Wɔde nnuan ne ntade kɔmaa nnipa a wɔn afie asɛe no, na Adansefo a wɔwɔ kurow no mu nso faa ebinom kɔtenaa wɔn afie.
Congo (Kinshasa): Adansefo no de nnuru kɔmaa nnipa a wɔyare ayamtunini. Nsu kɛse bi tɔe ma eyiri faa kurow no so, enti Adansefo no de ntade kɔmaa nnipa a ɛkaa wɔn no. Nnipa a na wɔwɔ atubrafo atenae no, wɔkɔmaa wɔn nnuru, aba a wobedua, ne ntade kilogram bebree.
Venezuela: Nsu kɛse tɔe ma eyiri faa kurow no so, na atɛkyɛ twiw faa asase no so. Adansefo 288 a atoyerɛnkyɛm no kaa wɔn no, atoyerɛnkyɛm bere mu aboafo kɔboaa wɔn. Adan foforo a wosii no, ɛboro 50. Yɛfrɛ osutare bi Lake Valencia, na sɛ eyiri a ɛhaw adwene paa. Nnipa a ɛsɛe wɔn afie no, atoyerɛnkyɛm bere mu aboafo kɔboa wɔn.
Philippines: Mframa gyampantrudu bɔe ma nsu yirii wɔ ɔman no fã bi. Yɛn adwumayɛbea a ɛwɔ hɔ no de nnuan ne ntade kɔboaa nnipa a atoyerɛnkyɛm no kaa wɔn no. Afei bere a nsu no yowee no, Adansefo a wɔwɔ kurow no mu boa ma wosiesiee hɔ.
Canada: Ogya tɔɔ kwae mu wɔ Alberta. Ɛno akyi no, Adansefo a wɔwɔ kurow no mu yii ntoboa kɛse bi kɔboaa Yehowa Adansefo asafo bi a yɛfrɛ no Slave Lake sɛ wɔmfa nsiesie hɔ. Asafo no huu sɛ wonhia sika no nyinaa. Enti wɔde sika no dodow no ara kɔboaa nnipa afoforo a atoyerɛnkyɛm ato wɔn wɔ aman foforo so.
Côte d’Ivoire: Ansa na ɔko bi resi, bere a esii, ne bere a esii akyi no, Adansefo de nnuru kɔmaa nnipa a wohia mmoa no. Wɔmaa wɔn baabi tenae, na wɔsan maa wɔn nneɛma foforo nso.
Fiji: Nsu kɛse bi tɔe ma nsu yirii faa kurow no so. Eyi maa Adansefo mmusua 192 hweree wɔn afuw ne wɔn nnwuma. Wɔkɔmaa wɔn nnuan.
Ghana: Nsu yirii wɔ ɔman no apuei fam. Nnipa a nsuyiri no kaa wɔn no, wɔkɔmaa wɔn nnuan ne aba a wobedua. Afei, wosii afie foforo maa wɔn.
United States: Mframa kɛse bi bɔe, na ebubuu Adansefo afie 66 wɔ amantam mmiɛnsa mu. Afei, ɛsɛee Adansefo afie 12. Ná nnipa dodow no ara wɔ nsiakyibaa, nanso Adansefo afoforo yii ntoboa kɔboaa wɔn.
Argentina: Ogya pae fii bepɔw mu wɔ ɔman no anafo fam, na ɛsɛee nkurɔfo fie. Yehowa Adansefo asafo no boaa nnipa a wɔte saa no.
Mozambique: Ɔpɛ sii, na wɔde nnuan kɔmaa nnipa bɛboro 1,000 a ɛkaa wɔn no.
Nigeria: Bɔs bi konyaa akwanhyia ma Adansefo 24 pirae. Adansefo afoforo yii ntoboa kɔboaa wɔn. Ntɔkwaw sii mmusuakuw bi ntam wɔ ɔman no atifi fam ma nkurɔfo hweree wɔn afie. Adansefo no boaa wɔn mu bebree.
Benin: Nsu kɛse bi yirii wɔ ɔman no mu, na nnipa a ɛkaa wɔn no, wɔmaa wɔn nnuru, ntade, ntontonnan, nsu pa, ne baabi a wɔbɛda.
Dominican Republic: Mframa kɛse bi bɔɔ wɔ ɔman no mu. Yehowa Adansefo asafo ahorow a ɛwɔ hɔ no de nneɛma kɔboae, na wɔboa ma wosiesiee afie ahorow no.
Ethiopia: Ɔpɛ sii wɔ mmeae mmienu, ɛnna nsu yirii wɔ baabi foforo. Adansefo no boaboaa sika ano kɔboaa wɔn a asɛm ato wɔn no.
Kenya: Bere a ɔpɛ sii no, woyii ntoboa kɔboaa wɔn a atoyerɛnkyɛm no kaa wɔn no.
Malawi: Wɔkɔboaa nnipa a wɔte Dzaleka atubrafo atenae no.
Nepal: Mmepɔw dwiriw gui, na ɛsɛee Ɔdansefo bi fie. Adansefo a wɔwɔ hɔ no pɛɛ baabi ma ɔtenae, na wɔde mmoa foforo a ohia nso maa no.
Papua New Guinea: Nkurɔfo bi hyɛɛ da kɔhyew Adansefo bi afie nwɔtwe. Yehowa Adansefo asafo no yɛɛ nhyehyɛe sii afie no bio.
Romania: Nsuyiri bi nti, Adansefo bi hweree wɔn afie. Adansefo afoforo boae ma wosii afie no maa wɔn bio.
Mali: Ɔpɛ nti, ebinom antwa nnɔbae papa biara, na eyi maa ɔkɔm bae. Adansefo a wɔwɔ Senegal yii ntoboa kɔboae.
Sierra Leone: Ná Yehowa Adansefo bi te baabi a ntɔkwaw asi hɔ. Enti ntɔkwaw no akyi no, Adansefo bi a wɔyɛ adɔkotafo fii France kɔhwɛɛ ayarefo no.
Thailand: Nsuyiri kɛse bi sɛee nneɛma pii wɔ amantam bebree mu. Atoyerɛnkyɛm bere mu aboafo siesiee afie 100 ne Ahenni Asa 6.
Czech Republic: Bere a nsuyiri sɛee fie bebree wɔ Czech Republic no, Adansefo a wofi Slovakia bɛboaa wɔn.
Sri Lanka: Bere a ɛpo twiw faa asase so no, wɔyɛɛ nnwuma pii de boaa nnipa a atoyerɛnkyɛm no kaa wɔn no.
Sudan: Ɔko sii ɔman no mu, na ɛmaa Yehowa Adansefo binom guanee fii baabi a wɔte. Adansefo foforo de nnuan, ntade, mpaboa, ne rɔba kɔmaa wɔn.
Tanzania: Nsuyiri kɛse bi sii, na mmusua 14 hweree wɔn nneɛma. Yehowa Adansefo asafo ahorow a ɛwɔ mpɔtam hɔ no de ntade ne nneɛma foforo a wohia kɔmaa wɔn. Dan baako de, wɔsan sii no foforo.
Zimbabwe: Ɔpɛ maa ɔkɔm baa ɔman ne fã bi. Wɔde sika ne nnuan kɔmaa wɔn a ɔkɔm no kaa wɔn no.
Burundi: Adansefo no kɔboaa atubrafo, na wɔhwɛɛ wɔn mu ayarefo.
Sɛ asɛnkɛse bi si a, hwɛ nneɛma mmiɛnsa a Bible kyerɛ sɛ ɛma yɛhu sɛ ɛfi Onyankopɔn.
NEA YƐYƐ DE BOA ƆMANFO